Fanamafisana ny baiko. | Avy amin'ny Linux
Fanamafisana ny baiko.
@Jlcmux | | GNU / Linux, About us
Firy amintsika no sahiran-tsaina amin'ny fanoratana baiko lava toy ny "sudo apt-get install" na "fanavaozana sudo apt-get"?
Manelingelina ahy manokana izany ary mandany fotoana koa. Amin'ity indray mitoraka ity dia te-hanoro anao fomba mora be aho mba "hanafohezana" na hamintina ireo baiko ireo mba hanamorana ny fiainantsika.
Andao handeha amin'ny lalao.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny fidirana ho faka
Manoratra ny teny miafinao ianao ary manao izao manaraka izao:
# nano / bin / fanavaozana
Eto izahay dia namorona ny baiko. «Vaovao farany» ary manoratra izahay
#sudo apt-mahazo fanavaozana
Manome alalana azy izahay izao.
# chmod + x / bin / fanavaozana
Ary ankehitriny isaky ny manoratra fanavaozana ao amin'ny console izahay dia hanavao ny toerana anaovanay izany.
Raha manoratra nano / bin / baiko izahay ary efa misy ny fisie dia aza mamafao na manova azy satria hanimba programa hafa ianao. Ny tokony hataonao dia ny mitady fomba hafa hanomezana anarana izany baiko izany.
Amin'izany no ahafahantsika manatsotra ny karazana baiko rehetra. Ahoana ny fomba hivoahana avy amin'ny sudo # apt-get install to # install
Miarahaba, ary antenaiko fa tianareo izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Fanamafisana ny baiko.
24 hevitra, avelao ny anao
Santiago Caamano dia hoy izy:
Izaho manokana dia mieritreritra fa mahazo aina kokoa ny mamaritra ny solonanarana ao amin'ny bashrc na amin'ny rakitra .bashrc
fanavaozana alias = »sudo apt-get update»
Valiny tamin'i Santiago Caamaño
Ghermain dia hoy izy:
Tena mahaliana fa amin'ny zavatra hitako amin'ny pikantsary, hampandehanana azy dia mila miditra ho faka aho ary avy eo manoratra "fanavaozana"; dia tsy hitako ilay fahasoavana.
Mamaly an'i Ghermain
Tsia, izany satria farafaharatsiny mba tsy anaovako mpampiasa mahazatra amin'ny hatsembohana, ka anjarako izao. Fa raha manana izany ianao dia hangataka aminao fotsiny ny tenimiafina ary dia izay.
Ny iray hafa dia tsy mametraka sudo apt-get sns ..
su -c "baiko" (teny nalaina)
Avy eo mangataka aminao ny tenimiafin'ny ROOT izy, ary rehefa vita io dia mbola mpampiasa mahazatra ihany ianao.
RTFMExe dia hoy izy:
Tsy ilaina ny miditra amin'ny faka, dia ny fahasoavana ny fametrahana ny fisie noforonina 😛 Na izany na tsy izany dia efa misy izany solon'anarana izany.
Valiny amin'ny RTFMExe
nametraka sudo tao amin'ilay rakitra noforonina. Nihinana an'io ampahany io aho 😛
Christopher castro dia hoy izy:
Mora kokoa amiko ny manampy ireo solonanarana amin'ny .bashrc
fanavaozana alias = 'fanavaozana sudo aptitude'
Valiny tamin'i Christopher Castro
merlin ny debianite dia hoy izy:
Tsara aho fa hanao lahatsoratra toa izany koa saingy miaraka amina script, tena tsara ary manana drafitra tsy ho fantatra intsony aho izao. XD.
Lahatsoratra tsara. raha azo omena isa dia hanome +100.
Valio i merlin ilay debianite
Amin'ny ankapobeny dia tsara ilay hevitra, fa ny fahazoan-dàlana dia misy dikany.
Aleoko ny filaminana.
Inona no tianao hambara? Mbola mila miorim-paka izy io na ny mpampiasa dia ao amin'ny sudoers hahafahany mampandeha azy. Na inona na inona lisitra / bin / fanavaozana manana alalana fanatanterahana. apt-get sy sudo dia tsy manova ny fahazoan-dàlana.
Midika izany fa na iza na iza miditra ao amin'ny pc dia afaka manao an'io asa io nefa tsy mahazo alalana faka.
Efa nohazavaiko, hangataka tenimiafina foana aminao izany na hiditra ho faka. Tsy misy ifandraisany amin'izany
Heveriko fa ny zavatra tsotra indrindra dia ny manampy alias amin'ny .bashrc araka ny voalazan'izy ireo tamin'ny fanehoan-kevitra etsy ambony
Ilgrim dia hoy izy:
Ny fanamafisana ny zava-misy fa ny tena marina dia ny fampiasana alika bash hanaovana an'io, ny zavatra tena mandeha ra dia ny famelanao ny script ao anaty / bin fa tsy / usr / local / bin.
Mankaleo ahy ny mahita amin'ny ankamaroan'ny bilaogy ny fomba fitsipahanao ny LHFS ary ianao manaparitaka fako manerana ny rafitra fisie tsy misy filaminana na kaonseritra.
Mamaly an'i Ilgrim
ligament dia hoy izy:
Amena izay nolazain'i Ilgrim
Valiny tamin'i Raist
Heveriko fa marina ny anao toa ny winbug miaraka amina rakitra sy tranomboky maro be manao zavatra mitovy. XD.
Aleo mampiasa ny Alias.
Nanao script fanavaozana sudtit aptitue 2 andalana sudo aptitude fanavaozana feno aho dia apetrako ao / usr / bin / ny script, ary havaoziko tanteraka ny rafitra sy ny toerana anaovany azy amin'ny alàlan'ny fanoratana 'fanavaozana' ao amin'ny console fotsiny. Fa ity dia script izay manao zavatra 2 fa tsy iray ihany.
Azonao natao ihany ny nanao solonanarana misy baiko marobe:
alias actualizar='sudo aptitude -y update && sudo aptitude -y safe-upgrade && sudo aptitude full-upgrade && sudo aptitude autoclean'
Tsy fantatro mihitsy hoe aiza no hametrahako ny script-ko, ny ataoko matetika dia ny mamela azy ireo ao anaty folder miafina ao an-tranoko ary avy eo ampio ny lalana mifanaraka amin'ilay Path ao amin'ny rakitra .bashrc
Mety ve ny manao azy toy izao sa tsara kokoa ny mamela azy ireo ao / usr / local / bin rehefa manome hevitra ianao?
Mpampiasa iray ihany ity ekipa ity.
Eny, mazava ho azy, tonga lafatra izy io, miankina amin'ny filanao rehetra izany.
Toy izany koa, ny soso-kevitr'ity mpanoratra ity dia kisoa ary fanao ratsy be io, na izany na tsy izany dia hadio kokoa ny manampy lahatahiry ao amin'ny / usr / bin (izay ampianay ny $ PATH) ary eo eny ao anatin'ity ampio ny script-ntsika rehetra.
Aleoko mifehy azy ireo ao amin'ny / tranoko fa tsy / usr / bin, tsy haiko, aleoko toy izany.
Zavatra iray hafa izay tsy fantatro velively ny hametrahana azy dia ireo rakitra zaraina amin'ireo mpampiasa hafa ao amin'ny ekipa:
Amin'ny solosaina hafa dia manana mpampiasa roa aho ary ny hevitra hizara ny fampirimana horonan-tsary mba hampiasan'izy roa.
Ny nataoko dia ny famoronana fampirimana horonan-tsary ao anaty / haino aman-jery satria misy ny fidiran'ny mpampiasa rehetra ary avy eo mamorona rohy eo an-tranon'ny mpampiasa tsirairay izay manondro ilay folder / media / horonan-tsary voalaza.
Mety ve izany? Izany no ilazako izany satria manana olana alalana aho
Iza no hataoko tompon'ny lahatahiry voalaza?
Ilaina ihany io raha toa ka tiana hovonoina ho faka ny script nefa tsy ampidirina ny teny miafina, koa ankoatry ny script namboarina dia tokony ahitsy ny tsipika mifanaraka amin'ny visudo.
Ho an'ny zavatra hafa rehetra misy dia misy ALIAS, ny nataonao dia shit, tsy hay hazavaina.
Ny hitako hafahafa dia ny te hampiasa 'install' izay baiko miaraka amin'ny asany manokana. Araka ny lazain'ny rehetra, solonanarana ary tsy manao tantara be loatra.
blitzkrieg dia hoy izy:
Mamaly an'i blitzkrieg
Linux mandatsaka ny fanohanana ho an'ny processeur 386
Google + ho an'ny iOS nohavaozina